Volley-ball – “Afrique 2015” : nandresy an’i Kongo ny Zandary malagasy | NewsMada
Volley-ball – “Afrique 2015” : nandresy an’i Kongo ny Zandary malagasy
Avy hatrany dia nisantatra fandresena ny GNVB, ekipan’ny Zandary avy eto Madagasikara, teo amin’ny andro voalohany, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja volley-ball. Fihaonana notanterahina, omaly alarobia, tany Le Caire, Egypta. Resin’izy ireo, tamin’ny seta mazava, 3 noho 0, ny DGSP avy amin’ny Repoblika Demokratikan’i Kongo.
Araka ny tati-baovao, 25 noho 19 nisarahan’ny roa tonta, teo amin’ny seta voalohany. Somary nanohitra kosa ny Kongoley avy eo, saingy tsy nanaiky lembenana ry Eric sy ny namany. 25 noho 22, nisarahan’ny roa tonta. Tsy nitsahatra hatreo anefa izany fahombiazana izany fa nitohy hatramin’ny seta fahatelo, izay mbola lasan-dry zalahy, tamin’ny isa 25 noho 19, indray.
Hitohy anio ny fifanintsanana ka ny Zamalek-n’i Egypta no hifandona amin’ny GNVB. Hilalao eo anatrehan’ny mpijery azy ny Zamalek, izay heverin’ny rehetra fa “favori”, amin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ity. Hiezaka hanohitra ny mpampiantrano izany, ny Zandary malagasy amin’ity. Tsiahivina fa miaraka amin’ny GNVB, ao anatin’ny vondrona «A», ny Zamalek, ny Swehly (Lybia), ny AS Police avy any Senegal, ny Hamad Afrika Atsimo ary ny DGSP Kongo.